China Cold Stamping bobongolo, Die Casting bobongolo, Machining Lathe CNC, mpanamboatra sy mpamatsy silipo vita amin'ny silipo - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Dongguan Fuya Hardware & Plastic Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2008. Orinasa mampiditra R&D, endrika, famokarana ary varotra izy io. Ny sehatry ny orinasa lehibe; plastika, vokatra ao an-trano, mpanantona akanjo, farango varavarana, faritry ny kapoaka hosoka, rakitsary, fefy herinaratra, fefy fampirantiana, sofina, kofehy fanamafisana, sns., fitaovana, fanodinana aliminioma, fantson-telefaona, rindrambaiko finday, takelaka elektrika, hafanan'ny fifandraisana milentika, milina fanodinana CNC, sns sns. Fyaya Hardware dia manana andian-tsarimihetsika efa ho 100 an'ny Japan Tsugami sy milina famolavolana haingam-pandeha avo lenta sy solosaina, lathes automatique ary fitaovana fanampiny. Mba hitadiavana ny fametrahana avo lenta ny fikirakirana CNC, ny orinasa dia manana fitaovana fanandramana mandroso toy ny fitaovana fandrefesana contour, telo-dimensional, roa-dimensional, tester ho an'ny fahasarotana, tester automatique infrared, boribory, fahasarotana sns. manatsara ny fahaizany miasa amin'ny injeniera sy teknika, miankina amin'ny famokarana sy ny traikefa fitantanana manan-karena ny Fuya Hardware mba hanatanterahana am-pahavitrihana ny fanovana avy amin'ny famokarana ozinina sy ny fampandrosoana ny haitao mankany amin'ny sehatry ny e-varotra, manaraka akaiky ny fiparitahan'ny toekarena fahalalana sy ny toekarena tambajotra, ary miezaka hanangana orinasan-tseranana teknolojia. Atsangano tsikelikely ny faritany iraisampirenena mifototra amin'ny tanibe Shina ary miparitaka amin'ny faritra rehetra manerantany. Miezaha ho mpamily lehibe indrindra amin'ny fanovana indostrialy sy fanavaozana ao amin'ny Delta Renirano. Mamorona antony maharitra mandrakizay ny "maharitra, fitoniana, fampandrosoana, teknolojia ary iraisam-pirenena"!